'द फ्यामेली म्यान' अभिनेता शारिब भन्छन्, 'शाहरुख खानलाई भेट्दा झन्डै बेहोस भएँ' :: Setopati
एजेन्सी नयाँ दिल्ली, असार ८
भारतीय सिरिज ‘द फ्यामेली म्यान’ संसारकै चौथो चर्चित कार्यक्रम बनेपछि यसका कलाकारहरु पनि चर्चामा आएका छन्।
तीमध्ये ‘द फ्यामेली म्यान’का अभिनेता शारिब हासमी विशेष चर्चामा छन्। सिरिजमा मुख्य पात्र श्रीकान्त तिवारीको साथी भएर शारिबले जेके तालपडेको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। सो भूमिकामा गरेको अभिनयका कारण शारिबले धेरैबाट प्रशंसा कमाइरहेको हिन्दुस्तान टाइम्सले बताएको छ।
टेलिभिजन शोहरुमा लेख‍कका रुपमा काम सुरु गरेका शारिबको आजसम्मको यात्रा लामो र प्रेरणादायी छ। आफ्नो करियरको सुरुवाती दिनमा शारिबले एमटिभी, युटिभी र भी च्यानलमा काम गरेका थिए। कामको क्रममा उनी एकपटक चर्चित फिल्म ‘स्लमडग मिलिनियर’मा पासिङ क्यामिओ पनि बनेका थिए।
‘त्योबेला म कलाकार बन्छु भनेर सोचेको थिइँन। तर टेलिभिजनको जागिर छोडेपछि अभिनयमा पूरा समय दिएर काम गर्ने निर्णय लिएको हो,’ एक अन्तर्वातामा शारिबले भने, ‘आफ्नो पहिलो प्रोजेक्ट भने मैले जब तक है जान फिल्मबाट पाएको हो।’
सन् २०१२ मा रिलिज भएको फिल्म ‘जब तक है जान’मा पनि उनले सजिलै काम पाएका थिएनन्। शारिबका अनुसार सन् २०१० मा उनी फिल्मको अडिसनका लागि गएका थिए। तर पहिलो अडिसनमा उनी रिजेक्ट भए।
‘जब तक है जान’को अडिसनमा रिजेक्ट भएपछि उनले छोटो फिल्म ‘मेहरुनी’मा अभिनय गरे। फिल्म क्षेत्रमा काम पाउन मुस्किल भएर उनी पुरानै जागिरमा फर्किए। यसैको चार महिनापछि यशराज फिल्मको कास्टिङ निर्देशकले उनलाई फोन गरेर ‘जब तक है जान’को अडिसनको लागि बोलाए। तर चार राउन्डसम्म अडिसन दिँदा पनि उनी फेरी एकपटक रिजेक्ट भए।
‘मेरो भूमिका अरुलाई नै दिइएको रहेछ, त्यो सुन्दा नरमाइलो लागेको थियो,’ उनले भने, ‘यता जागिर खान सुरु गरिसकेको हुनाले त्यत्ति धेरै चिन्ता भने लिएको थिइँन।’
रिजेक्ट भएकै केही दिनपछि शारिबलाई फेरि फोन आयो। यसपटक उनलाई फोन यस चोपडाको असिस्टेन्टबाट आएको थियो। ती असिस्टेन्टले उनलाई छैटौँ पटकपनि अडिसनका लागि बोलाए। शारिब अडिसनका लागि गए र काम सकाएर आफ्नो अफिस फर्किए। आधी घण्टापछि उनलाई ‘जब तक हे जान’मा अभिनय गर्न चुनिएको जानकारी साथ फोन आयो। त्यसबेला उनले आफ्नो खुसी सम्हाल्न नसकेको अन्तर्वातामा बताए।
‘सुटिङको पहिलो दिन यशराज फिल्म स्टुडियोमा जाँदा त्यहाँ मैले यस चोपडा, अनिल मेहता, करण जोहार र आदित्य चोपडालाई देखेको थिएँ। चर्चित व्यक्तिहरुलाई एउटै छानामुनि बसेर काम गर्न पाउँदा म दंग थिएँ,’ आफ्नो अनुभव सुनाउँदै शारिबले भने, ‘त्यो दिन मेरो पहिलो दृश्य शाहरुख खानसँग थियो।
त्यो सिनमा शाहरुखले मेरो अनुहारबाट तन्नाको खोल हटाउनु पर्ने थियो तर त्यतिबेलासम्म मैले शाहरुखलाई भेट्ने मौका पाएको थिइँन। म असिस्टेन्ट निर्देशकसँग आफ्नो दृश्यका लागि अभ्यास गरिरहेको थिएँ। अभ्यासकै क्रममा मेरो अनुहारबाट तन्नाको खोल शाहरुख खानले स्वयम् निकाले। उनलाई आफ्नै आँखा अगाडी देखेको त्यो पहिलोचोटी थियो। उनलाई देख्दा झन्डै बेहोस भएको थिएँ।’
सुटिङ सकिएपछि शाहरुख खानले शारिबसँग कामको रमाइलो भएको र उनी राम्रो अभिनेता रहेको बताएका थिए रे! जसले गर्दा उनको पहिलो सुटिङको दिन निकै विशेष र यादगार रह्यो।
‘जब तक हे जान’ पछि शारिबले सन् २०१४ मा रिलिज भएको फिल्म ‘फिल्मस्तान’मा अभिनय गरेका थिए। यो फिल्मले स्क्रिन अवार्ड पाएको थियो, जसमा कार्यक्रमको होस्टको रुपमा शाहरुख खान नै थिए।
‘आवर्ड दिने बेला जब मेरो नाम लिइएको थियो शाहरुखले मलाई उनको साथी भनेर चिनाएका थिए,’ शारिब भन्छन्, ‘उनको मुखबाट त्यति सुन्न पाउनु मेरो लागि ठूलो कुरा थियो।’
‘फिल्मिस्तान’ले राम्रो चर्चा पाए पनि त्यसपछिको तीन वर्ष भने शारिब गतिलो काम नपाएर खाली थिए। पछि उनले ‘बत्ती गुल मिटर चालु’, ‘उजडा चमन’, ‘फुल्लु’ जस्ता फिल्ममा काम गरे।
उनको वेब सिरिजको यात्रा भने सन् २०१९ मा रिलिज भएको ‘द फ्यामेली म्यान’को सिजन एकबाट सुरु भएको हो। त्यसपछि पनि उनी अन्य चर्चित भारतीय सिरिज ‘असुर’, ‘स्क्याम १९९२’, ‘अ भाइरल वेडिङ’मा देखिएका छन्।
‘अहिलेको सफलताले मेरो जीवनमा केही फरक ल्याएको छैन, किनकी मैले दुवै राम्रो र नराम्रो क्षण भोगेको छु,’ शारिब भन्छन्, ‘समय परिवर्तन भइरहन्छ तर त्योसँगै हामीले आफ्नो व्यवहारमा भने फरक ल्याउनु हुँदैन।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ९, २०७८, १७:१९:२६
कहिले रिलिज हुन्छ 'बाहुबली' अभिनेता प्रभासको नयाँ फिल्म 'राधेश्याम'?
दीपिकाले यसरी गरेकी थिइन् रणवीर कपुर र रणवीर सिंहको तुलना
फरहान अख्तरको 'तूफान'ले बनायो रेकर्ड
मानहानीमा २५ करोड भारु क्षतिपूर्ति माग्दै अदालत पुगिन् शिल्पा सेट्टी
साहरुख र काजोल फेरि एउटै फिल्ममा खेल्दै
जन्मदिनमा संजय दत्तलाई 'केजिएफ २' को नयाँ पोस्टर